iPhone 7 inogona kuve neiri nani skrini kupfuura iyo Galaxy S7 | IPhone nhau
Sezvo gore rega rega, kune runyerekupe rwakawanda runotaura nezve izvo izvo Iphone 7. Iwo anonzwika zvakanyanya ndeekubviswa kweiyo 3.5mm headphone chiteshi uye iyo ine mbiri kamera. Hapana kana runyerekupe runotaura nezvechidzitiro cheiyo inotevera iPhone, asi mukana wekuti iyo iPhone 2017s ine AMOLED skrini ichauya muna 7 inokosheswa. Nezve iyo smartphone iyo ichaunzwa munaGunyana uye kana isu tikatambira yazvino DisplayMate ongororo seyakavimbika, iyo iPhone 7 inogona kuve neakakwirira kwazvo skrini kupfuura makwikwi.
Paive nekushoropodzwa kwakawanda kwakagamuchirwa naApple kwekutanga iyo 9.7-inch iPad Pro ine "chete" 2GB ye RAM. Chinhu chakashata ndechekuti isu tinogara tichitonga zvese nezvakaipa uye isu hatiwanzo kufunga nezveakanaka mapoinzi, senge chidzitiro chemuchina wekupedzisira kuti usvike mumhuri yeIOS. Zvinoenderana neDisplayMate, iyo Yechokwadi Tone kuratidza, iyo yakatanga padivi neiyo izere-saizi yePad Pro Pro mwedzi wapfuura, inoputsa marekodhi mazhinji akaiswa ekuratidzwa kwetafura. Iyo nyowani nyanzvi iPad inounza mhedziso kunyatso kurara kupfuura chero chinhu chiri pamusika, iyo yakaderera skrini yekuratidzira yechero nhare mbozha (mafoni uye mahwendefa), uye yepamusoro-soro kupenya kwepamusoro mune yakazara-saizi piritsi.
Iyo yepamusoro yepamusoro meseji chaiyo yechero skrini kune ese Ruvara maGamuts (1.35 JNCD), iyo yakadzikira yekuratidzira skrini yechero nhare mbozha (1.7%), iyo yepamusoro yepamusoro kupenya pane yakazara-saizi piritsi padanho remufananidzo (511 nits), iyo yepamusoro iyo yepamusoro musiyano mamaki mune yakakwira ambient mwenje (301) uye iyo idiki diki misiyano kana uchitarisa pakona (zvese zviri pasi pe2.0 JNCD).
Sezvatakaratidza mune yeyakakura size chati chikamu, iyo 9.7-inch iPad Pro inonunura zvese zvakaenzana zvakaenzana pane kuratidzwa kwepamusoro. Imwe chete yezvikwiriso kuti uwane chikamu chakasvibirira (kubva zvakanaka kusvika pakukwirira) mune zvese bvunzo uye zviyero zvikamu (kunze kwekusiyana kwekujeka kana uchitarisa kune imwe kona, mune ino maLCD) kubvira patakanyora Chekutanga chinhu mu iyo 2006 Ratidza Tekinoroji Pfura-OUT akateedzana, chiitiko chinoshamisa chechiratidziro ichi.
Iyo iPhone 7 yaigona kushandisa imwechete Yechokwadi Toni kuratidza seye 9.7-inch iPad Pro
Sezvo kana zvese zviri pamusoro zvaive zvisina kukwana, iyo skrini yeazvino iPad zvakare inoratidza musiyano wakanakisa munzvimbo dzakakwirira dzakapenya uye zvishoma kushanduka kwemavara kana zvichitariswa pakona. Kuienzanisa neiyo 12.9-inch iPad Pro, iyo diki modhi inorova hama yayo hombe mune zvese asi saizi. Asi chinonyanya kufadza ndechekuti kufambira mberi kwetekinoroji uku kunogona kushandiswawo pazvikwiriso zvidiki, chimwe chinhu chinoita kuti tifunge nezve iPhone 7 ichaunzwa mushure mezhizha:
Sezvo Apple ichida kutakura matekinoroji ayo matsva kubva kune chimwe chigadzirwa ichienda pane chimwe, fungidziro yakanaka ndeyekufunga kuti iyo iPhone 7 inoshandisa diki vhezheni ye9.7-inch iPad Pro skrini. Kukwidziridzwa kunogona kusanganisira iyo nyowani DCI-P3 Wide Ruvara Gamut uye zvakare kumisikidza kweanopokana-kuratidzira kupfeka kunogona kuendesa kutaridzika pasi kubva pa4.7% kusvika 1.7% (chinhu chinenge 3% yekuvandudza). Zvese zviri zviviri budiriro zvaizovandudzawo iyo iPhone's skrini yekuita uye kuverenga mumamiriro akakwirira emwenje. True Tone inogona kuwedzerwa kana Apple ichigadzirisa iyo ambient light sensors kuti vagone kuyera ruvara kuwedzera kune kupenya.
Ndine iPad 4, iyo iPhone 6s uye ndakafananidza yavo skrini neiyo 9.7-inch iPad Pro, ndinofanira kutaura kuti iyo iPad Pro inotaridzika zvirinani. Icho chinhu chandisingakwanise kutaura kuti sei chaizvo, asi iwe unogona kunzwa kuti maziso ako ari kushanda zvishoma, uye icho chinhu chinokosheswa patinopedza maawa akati wandei pazuva tichitarisa pamasikirini. Mushure mekuverenga iyo DisplayMate tsananguro maererano nekuverengeka kweChokwadi Tone kuratidza, ini ndogona kutonzwisisa manzwiro andakave nawo pandakatarisa iyo nyowani iPad.
Screen yakafanana pane iyo iPhone 7 ingave yakanaka, asi isu tichazofanira kumirira ingangoita mwedzi mishanu kuti tizive kana ichizosvika apple apple kana kwete.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Iyo iPhone 7 inogona kuve neiri nani skrini kupfuura iyo Galaxy S7
Ahahahahahah… .hahahahahaha… .zvakanaka… sejoko zvakanakisa chaizvo… chinyorwa ichi chinogona kushandiswawo kuNhasi
Pindura kuna DANIELSAN08
Ini ndinojekesa, ini ndiri fanboy weApple, izvozvi ndine iPhone 6, asi ini ndichave ndakananga uye ndichokwadi. Zvirinani kupfuura iyo S7 skrini? Zvinoita kunge zvishoma kwandiri, shamwari inayo uye handisati ndamboona yakajeka yakajeka, kutanga, Apple yaizofanira kuisa MINIMUM yakazara hd skrini pane 4,7 uye ipapo tinotaura. Kunyangwe iwo mapikisheni ari "asingaoneke kune ziso rakashama" iro retina skrini haringotarisike senge iri pane renyeredzi s7, rinotaridzika kuva rakanaka kwazvo, asi harina fananidzo. Ndinoda kuona kuti VR inotaridzika sei pane iPhone yakapihwa "yakaderera" resolution kana ichienzaniswa nemamwe musika. Kwaziso
Pindura kuna Aleg_1422
Iwe unogona ikozvino kutumira (dzinenge) mhando dzese dzemagwaro neWhatsApp